I-gallbladder yilungu apho ibhola liqokelela khona. Kwinkqubo yokugaya, akuthathi indawo yokugqibela. Nangona kunjalo, lo mzimba unako ukuzisa iingxaki ezininzi, ukuya kutshintshwa kwawo. Lo msebenzi unyanzelekile. Yaye ukuba isigulane sithinte ukususa i-gallbladder, uyazigweba kwimiphumo emibi. Ukuhlala kunye nokususwa kwe-vestile, unokuzijonga ngokutya okufanelekileyo kwaye uzinciphise ukusetyenziswa kwetafile zetyuwa, amafutha kunye nokutya okuthosiweyo, okunamafutha kunye nokutya okucoca. Iinkcukacha ezongezelelweyo malunga nesondlo esifanelekileyo xa ususa i-gallbladder ziya kuxutyushwa kule nqaku.
Yintoni i-gallbladder ibonakala ngathi? Liyilungu elingenalutho lephepha lebhiliyari yefom ye-oval, enepropati yokwelula. Ubukho beli qumrhu buvumela i-bile eveliswe ngesibindi ukuba ifikelele ngaphakathi kwayo kwaye iqokelele kuyo, ibe yinyameko, iyenzileyo kwaye imnyama.
I-gallbladder isuswe ngenxa yezizathu ezininzi. Ngokuqhelekileyo, yakha amatye. Izizathu zokubunjwa kwazo zininzi. Phakathi kwabo, kunye nokungondleki, kunye ne-cholesterol ephezulu, kunye nokufa, kunye nokunyuka kwe-bile, ngenxa yokuphila kwindlela yokuphila. Imiphumo yokubunjwa kwamatye - oku kukulimala kwebladder, ukulula kunye nokuvela kwe-decubitus. Ngaphezu koko, isifo singakwazi ukujoyina le nkqubo. Ngenxa yoko, kukho ingozi yokungena kweendonga zebhola. Oku kukubonakaliswa kwe-cholecystectomy, oko kukuthi, ukususa isantya.
Emva kokuba i-gallbladder sele isusiwe, kwiimeko ezininzi kukho uphuhliso lwe-postcholecystectomy syndrome. Oku kuyinkimbinkimbi yesityilo samanzi, ukunqandwa, intlungu kunye ne-jaundice, okuwuphawu lokulimala kwi-bile duct. Isizathu se-syndrome sinokuba nezinye izifo zesigca esiswini. Kwakhona, isizathu siza kutyunjwa ngokukhawuleza ukususa isilwanyana, ukulimaza iidolo ngexesha lotyando.
Isondlo xa ususa isikhumba.
Ngoko, i-gallbladder, esebenza njengenkunkuma ye-bile, isuswe. Akukho ndawo yokuqokelela i-bile, kunye ne-bile duct, evula kwi-duodenum, ivula kuphela xa ukutya kungena kwinqanaba lesisu. Ngoko ke, emva kokusebenza, kufuneka uhambelane nesondlo esifanelekileyo.
Imigaqo yokondla yokwelapha ilula. Umtya emva kokusebenza okunjalo kuya kufakwa, njengoluhlobo oluthile lwenkqubo yezokwelapha, oluye lunceda ekunciphiseni i-stagnation kwi-gallbladder. Isigulane siya kufuneka sitshintshe kwiindawo ezidlulayo kunye neziqhekeza. Kuthetha ukuthini rhoqo kunye neqhekeza? Oko kukuthi, ukutya kuthathwa kwiincinci ezincinci, ezintlanu okanye ezintandathu ngeentsuku.
Kutheni kubalulekile ukuba ulandele ngokulandelelanayo ezi zilandelayo? Ukuba awuhambisani nale miyalelo elula, ngoko kwiphepha le-biliary kuya kuba ne-stagnation ye-bile, ukubunjwa kwamatye kuya kuqala kwaye inkqubo yokuvuvukala iya kuba yasebenza.
Ukutya kubantu abangenawo i-gallbladder kubaluleke kakhulu kwiinyanga zokuqala emva kokusebenza. Umgaqo obalulekileyo wesondlo esifanelekileyo uya kuba ukwehla kumsebenzi (ngoko, ukucasula) kunye nezinye izitho zokugaya. Mkeleke ukutya okuphekwe kwisibini, kunye nokupheka okanye ukupheka. Iimveliso ezicaphukisa isisu kunye ne-intestinal mucosa zisuswe ngokupheleleyo ekudleni.
Imenyu ekhuthazwayo yezigulane ezisebenzayo.
Kwisiqalo sokuqala nesibini sesidlo sasekuseni (i-oatmeal, ilayisi, i-buckwheat), imifuno ephekiweyo, i-puree yemifuno kunye nealadi yemifuno iyamkelwa. Uhlobo olusetyenziswayo lwamafutha athile aphantsi, unokwenza i-herring, i-omelette okanye iphekiweyo, i-cottage ushizi, i-pasta ehlukeneyo, kunye kunye ne-fat-fat and cheese enunci (i-fat-free), unakho ukufumana itiye, kodwa ingaqineki, iziqhamo zitshintshwe i-juices kwi-non-acid.
Ukutya, isidlo semifuno okanye isisitya sinconywa, kunokwenzeka ukuba usebenzise ubisi kunye neodle, kunye ne-borsch, ephekwe yimifuno okanye ibhotela. Izitya zombini zilungiselelwe ngokusuka kumzimba, kodwa, kwakhona, iintlobo eziphantsi kweoli kunye nentlanzi. Inyama / intlanzi ibilisiwe okanye ibhaka emva kokubilisa. Yaye inyama iya kutyunjwa, mhlawumbi iyahluthwa. Njenge-dessert - i-compote, ijusi yesithelo okanye i-jelly.
Phakathi kwentsasa yokutya i-snack isiselo kunye nama-bhisikidi angaphantsi kwamathambo okanye i-bun, esomileyo kunye ne-fat-fat cottage cheese.
Isidlo kufuneka sibe ne-cereal ebisi, i-casserole, i-cottage cheese, okanye kwiimifuno ezityiweyo. Yamkela iimveliso zobisi ezimbi. I-glass of kefir ngaphambi kokulala ixesha kwakhona iyakwamkelwa.
Kwiimveliso, ezifunekayo ukuba zingabandakanywa kwisigulane esisetyenziswayo kwisidlo saso, oogqirha ba ndakanya, ngokungathandabuzeki, ukutya okucatshisiweyo. Ngokuqinisekileyo ayikwazi ukuba mnandi kunye nokutshaya. I-Tabo ngokutya okusemathinini, inyama kunye neentlanzi zeentlanzi, kwiintlobo ezahlukeneyo, kuquka u-anyanisi kunye negalikhi. Ukuthintela kubandakanya ukusetyenziswa kweesekese, isonka esiqhekezayo, iintlobo ezahlukeneyo zotywala. Amajikijolo omdaka kunye neziqhamo ezimuncu nazo zifakwe kwiluhlu lokutya okungavumelekanga. Ukungabikho kokutya kukuxhomekeke kwiitya ezibandayo - ukutya kufuneka kufudumele, ukuze kungabangela ukuba i-spasms iphetshana yebhiliyari. Ukusuka kwimifuno kunye nemifuno phantsi kwe-banji yokuwalala, israrel, isithombo, ukusuka kubhontshisi - iifayi kunye neembotyi. Yaye ke, ngokuqinisekileyo, ayilwamkeli utywala, ikofi kunye ne-tea eqinile.
Kancinci, ukuba isigulane sogulane sinelisekile, kuphela izithuba ezisisiseko zokutya ziyakunamathela kuzo: ukutya kunye nokutya okuhlukeneyo, kunye nokungabikho kokutya ezithile ekudleni kwabo. Ngokuqinisekileyo, izithintelo ezinzima zokutya ziya kuqala zibonakala zingenakwenzeka. Kodwa namhlanje abathengi banikezwa umlinganiselo omkhulu wemveliso. Khetha okusemgangathweni, ewe, unako. Ixesha elincinane kunye namava, kwaye kuludwe lweemveliso ezivumelekileyo, wonke umntu uya kufumana okuthandayo kwaye aneluncedo.
Ukuchaneka komsebenzi wokuqeshwa kwabagqirha kunye nokukhutshwa kwemveliso engekho mthethweni kubangela imeko yesigulana sangaphambili ukuba ikhethe i-cholecystectomy kwimeko yomntu onempilo.
Inyaniso yonke malunga nokutya: indlela yokuhlala esemncinci kwaye enhle
Ingaba iqhamo lomvini ngumxube wezityalo?
Iimpawu eziwusizo ze-birch sap
Iyintoni umphumo womnquba womsedare?